Maxaad ka ogtahay xilka loo magacaabayo RW hore Khyre? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxaad ka ogtahay xilka loo magacaabayo RW hore Khyre?
Wuxuu sheegtaa inuu waqti badan galiyay sidii Soomaaliya kaga mid noqon lahayd, waddamada faqriga ah ee aan iska bixin karin deymaha (HIPC Initiative), taasoo ugu danbeyn 2020 ay IMF sheegay in Soomaaliya noqotay waddankii 37aad ee gaar heerkaas.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, oo soo noqday Ra’iisul Wasaarihii ugu waqtiga dheeraa dalka, ayaa la warinayaa in loo magacaabayo La-taliyaha sare ee Hanaanka Deyn Cafinta ee Madaxweyne Xassan Sheekh.
RW Kheyre, wuxuu ka mid ahaa musharixiintii wacdaraha ka dhigay doorashadadii Madaxweynaha ee dhacday 15-ka bishaan May, wuxuuna ku jiray murqa-weyntii sanadihii danbe mucaaradka ku ahaa maamulkii xilka banneeyay ee Farmaajo hoggaaminayay.
Kheyre, intii uu ahaa Ra’iisul Wasaarihii 19-aad ee dalka, wuxuu si weyn uga soo shaqeeyay barnaamijka deyn cafiska (SMPs), gaar ahaan wajigiisa 3-aad iyo 4-aad, wuxuuna hore u sii waday, howlihii deyn cafinta ee soo billowday sanadkii 2013, markii Xasan xilka hayay.
Wuxuu si dhow arrinkaas ugala shaqeeyay, hay’adda lacagta adduunka ee IMF iyo bankiga adduunka [World Bank], wuxuuna xilliyo kala duwan ku faanay inuu dadaal xooggan ku bixiyay gaaridda bar dhammaadka barnaamijka, (point of completion).
Madaxweynaha dhawaan-galka ah, Xasan Sheekh, ayaa qaatay siyaasad uu garbihiisa ku istaajinayo siyaasiyiinta miisaanka culus ee ay isku safka ahaayeen sanadihii la soo dhaafay, waxaana xusid mudan iyo siyaasiyiin kale loo magacaabay xilal muhiim ah.